Maraykanka: Turkigu yuusan afgambiga nagu eedaynin - iftineducation.com
iftineducation.com – Maraykanka ayaa uga digay dawladda Turkiga in afgambigii dhicisoobay ay ku eedeeyaan hay’addaha dawladda Maraykanka, wuxuu sheegay in sheegashadaasi ay tahay “been cad oo dhaawici karta” calaaqaadkooda”.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka John Kerry ayaa hadalkaasi jeediyay kaddib markii wasiirka shaqaalaha ee dalka Maraykanku uu tilmaamay in Maraykanku ay ka dambeeyeen afgambiga.
Madaxwaynaha Turkiga Rejep Dayib Erdogan ayaa Maraykanka ugu baaqay in ay soo masaafuriyaan Fethullah Gulen oo ah sheekh Turkiga u dhashay oo ku nool dalka Maraykanka.
Erdogan ayaa ku eedeeyay in uu ka dambeeyay in uu isagu ka dambeeyay afgambiga, laakiin Gulen wuu diiday eedaymahaas.
Gulen oo jooga gurigiisa oo ku yaalla Pennsylvania ayaa saxafiyiinta u sheegay in uu Turkiga ka maqnaa in kabadan 15 sano uusanna ogayn xataa cidda isaga taageerta ee Turkiga gudahiisa ku nool.
Iskudayga afgambiga dhicisoobay ayaa bilawday habeenimadii jimcaha kaddib markii qaybo ka mid ah millatarigu ay la wareegeen buundooyin halbawle u ah Istanbul ayna weerareen dhismihii baarlamaanka ee Ankara.
Dawladda ayaa sheegtay in ay dhinteen 161 ruux oo shacab ah iyo 104 kuwii afgambiga damcay ah ayna dhaawacmeen1,440 ruux.
Ku dhawaad 3,000 oo askari ayaa la xiray 2,700 oo garyaqaan ayaana shaqada laga eryay sabtidii iyada oo dawladdu doonayso in adkaysato awoodda.